Jyoti Raj Adhikari's Portal - We All Nepali
Jyoti Raj Adhikari's Portal
कबिताहरु म भित्र को अर्को म ! म को हो ! म के हो म म नै हो वा होइन कि म भित्र अर्को म छ ...
Posted Feb 23, 2013, 9:57 PM by Weall Nepali
Songs किन किन किन किन हो किन किन जीवन, उराठ लाग्छ । किन किन मृत्‍यु, आफ्नै झ ...
Posted Feb 23, 2013, 10:00 PM by Weall Nepali
How to detect lies Truth about liesFrom my 7th speech inToastmasters International "There wasabig liar, who was pulled to court several times; he wasagreat story teller, he was ...
Posted Feb 23, 2013, 10:02 PM by Weall Nepali
नयाँ सोच नयाँ बर्षमा
बिछ्यौनमा बिझाउने कती तिखो काडा हो यो
अनन्तमा बिलाउने एउटा बिन्दु जीवन हो यो
कस्लाई कहाँ के का लागि खोज्दै हिडिरहेछु यहाँ
कसो के हो थाहा छैन जाने बाटो छैन कहाँ ।
चरालाई सोधे मैले कहाँ जान लाग्यौ चरी
बास सारी जान्छौ हामी पहिले देखी यसै गरी
गर्मी भए जाडो खोज्छौ जाडो भए गर्मी रोज्छौ
यसै गरी उद्गम देखी नाच्दै गाउदै हामी हिद्छौ ।
माछा लाई सोधे मैले खोला पौडी कहाँ जान्छौ
त्यही पारी समुद्र छ, वही हामी गई बच्छौ
पानी ले बगाइे दिन्छ हामीलाई डुंगा बनी
पौडी रन्छौ पुग्छौ लक्ष्य बाधा अड्चन यसै टरी ।
तारा गयो प्रकाश छोडि आफ्नो बाटो लागि सक्यो
त्यही आँखा टिकिरह्यो प्रप्ती पनि सुन्य भयो
धेरै चमक आकाशमा एकै सुर्य कफी छन
एउटा कला नजिक पुग्छ बाँकी सबै सख्छी छन ।
जहाँ जसै पौढे पनि उत्रिनु मात्र मुख्य हो
जती थाहा भए पनि सन्तोष नै त शुख् हो
हिडौ एकै बाटो लिई अब नौलो पाईला रखेर
नयाँ सोच जगर ल्याऔ शही सबै मन भाकेर !!!
नयाँ बर्ष को शुभकामना !!!
जीवन किन यस्तो ?
लौ कसरी बुझौ म के हो खुशी र जिबन को आधार !!
कहाँ छ खुशी? उत्तरी वा दक्षिणी गोलार्धमा र पातालमा
होइन आकाशमा वा ब्रम्हन्डको वरीपरी समतलमा
हल्लामा, ध्यानमा, कर्तब्यमा, प्रप्तिमा वा निन्द्रामा
खोज हेर गर सोध तर गर्हो छ पाउन यो स्वक्षन्दमा !!!
पारीभासा अलग छ सम्पूर्ण जीवनको पृथ्वीमा सबको
कोही जीवनलाई मुद्रामा तउलने र हिसाब लगाउने लयको
कोही केबल सोचेर मात्र प्रगतीको सास रट्ने र रटाउने
जीवनको यो केही थोरै बर्षहरु जोडेर गुनेर भाग गरी घटाऊने !!!
एऊटा कण मात्र हो यो सम्पूर्ण जीवन, ब्रम्हन्डबाट
अनन्तमा केबल निर्न्तरता मात्र हो अस्तित्व
फर्केर हेर्ने हो भने, रोकेर बुझ्ने हो भने समय लाग्छ
सुन्यमा बिलाउने एऊटा पलुवा बढ्छ र बाटो साट्छ !
सुन्यमा बिलाउने एऊटा पलुवा बढ्छ र बाटो साट्छ
बुझ्न प्रयत्न गर्ने हजारौ लाखौं उत्तर केही आएन
नयाँ सोच नौलो जागरले केही पहिलाएन यहाँ कसै
सुरु हुन्छ सुन्य बाट अन्त पनि सुन्यमा नै रहेछ
आखिर कस्तो यो जीवन अनौठो प्रयत्नको सन्जाल रहेछ !
अनी के का लागि लगिपरेको हो त आखिर
छोटो यो समय मा के नै पो धेरै गुटमुटाऊन सकिन्छ र
छोडेर जादा के चाँही रोक्न छेक्न बोक्न सकिन्छ र
सबै रहन्छ यही के हुन्छ तानेर आफुसँग लान सकिने र !
सोचो एक पटक मात्र, के का लागि यसरी दौडेका हौ
हेरौ एकै छीन किन यो सम्पूर्ण युद्ध र मानिने क्रिन्ती हरु
छोडौ बैमनस्यता र दुराचार, भरौ मनमा शन्ती र सदाचर
अनी हेरौ कस्तो देखिन्छ, यो संसार को आकार !
posted Aug 1, 2012, 12:54 PM by Weall Nepali [ updated Feb 23, 2013, 9:57 PM ]
म को हो ! म के हो
म म नै हो वा होइन
कि म भित्र अर्को म छ
कि म भित्र नै छैन म !
त्यो म लाई म
कसरी भनुं म
जब उ मेरो मान्दैन
आफै जिद्दी मेरो जान्दैन !
उ अर्कै सोच्छ
म अर्कै ठान्छ
म नियममा सोच्छु
उ प्रकृतिमा बाँच्छ !
म एक लेख्छु
उ दुई देख्छ
म कलमले लेख्छु
उ व्यवहारले भन्छ !
म कागजमा बिचार्छु
उ मस्तिस्कमा भन्छ
मेरो मानब सास फेर्छ
उसको मानब अकरणीय छ !
म अर्कै हु भन्छ
फेरी म रिसाउदा
उ सिथिल हुन्छ !
उत्तर खोजिरहन्छ !
यो सबै मोह राख्ने
म बाट पाप गराउने
त्यो कुन म हो !
त्यहिँ खोज्न त्यो म
भागिरहेको हो कि
वा बच्नलाई म
उसबाट भागिरहेको हु !
मेरो जीवन पिडामा
दिलासा पनि दिन्छ
घाउ हुदा दुख्दा !
मलम पनि लगाउछ
रुँदा आँशु पनि रोक्छ
लड्दा सम्हालेर बोक्छ
खुसीमा घमण्डी बन्छ
सधै म नै हु भन्छ !
म सोच्दछु राम्रो गरौँ
सबै आफ्नो भनौं
आफुलाई राम्रो बनाऔं !
जीवन को सत्य
एकदिन त पनि "मर्छस",
पनि संकेत गर्छ !
पत्ताउन मन लाग्छ,
जीवन त जीवन हो
भन्न मन लाग्छ !
को हो त त्यो अखिर
जसले श्वास चाल्छ
सबै देख्छ अनि सोच्छ
म भित्र भित्र बाटै बोल्छ !
के उही मेरो राम
अल्लाह, यशु या बुद्ध
के म हुँ म भित्र
ति सबै मेरा सुमित्र !
कहाँबाट म पाउछु
यी सक्ति देखन सबै
आतिन्छु दुख देख्छु जसै !
यी दुइ महरु को मिलन
नै हुनु पर्छ चैतन्य
यी महरु एक म हुदाँ नै
शान्ति होला सर्बत्र !
मिलन गार्हो छ,
मानव सदै ऊसबाट भाग्दछ
नाच्दछ फेरी भेट्दछ
म उसैको टाउकोमा बाँच्दछ !
2008 - Iowa, USA
परदेसबाट घरमा चिठी !
सानो सानो भन्दा भन्दै
कति ठुलो भएछ
हेर त बाबा बाबा भन्थ्यो आउँदा
अब त चिन्न छोडेछ !
होनी मैले नै सिकाएको हो
उसलाई बाबा भन्नलाई
तिमीले त बुवा भन्नु भन्थ्यौ
आफु चाही बरु बाबा नै भन्थ्यौ !
दाद्दा द्द्द्दा भन्यो
अनि बाबा हो मैले भनें
हातमा समाती एक पटक
निधारमा उसको चुमें !
कति मायालु देखिने हगी
म हिड्दा रोला जस्तो गर्यो
उ तिमि को रोएको हो वा मेरो मन
छुट्याउनै गार्हो पर्यो !
टुकु टुकु हिड्ने बेला
मैले ताती ताती भन्थें
कति पाइला हिड्यो
एक एक गरि गन्थें !
उसैको लागि हो त
भनि म हिडेको
बर्सौ बित्यो अब त
परदेसी को जुनी काटेको !
फुर्सदै छैन अरु सोच्न
दु:ख त नेपाल कै मीठो
सोचे सुख होला समयमा
के गर्नु पाइएन मात्र नि पिठो !
बच्चाले बुबु भन्दा
कति कान थुन्नु
बिरामी आमालाई कसरी ढाट्नु
पैसा बिना जीवन कसरी काट्नु !
बिहे गरि लेराको तिमीलाई
पाल्छु भनेको छु
दु:ख कति दिनु र
अर्धांगिनी हो, माया गर्छु !
मेरो छोराले नाभोगोस
हिजोको जस्तो दिन
फेरी हामीलाई नपरोस !
एक दिन त फर्कन्छु
कमाई अलि कति होस्
दुइ छाक खान, आमाको उपचार
र छोराको भर्ना गर्न पुगोस !
बिदेशमा त गार्हो रैछ
अब लेराको ऋण तिर्नु छ
ऋण सकियोस अनि
फेरी तिमि र म केहि गर्न जुर्नु छ !
बरु छोराले आज बाबा
भन्यो कि भनेन होला
बुढी आमाले त पकै सम्झिन
जे मा नि मलाई खोज्छिन !
आखा धमिलो भो रे
चस्मा चाहियो पोहोरै सालमा
भनि देऊ - पर्ख है आमा दुई चार दिन अझै
तिम्रो चस्मा आउछ यसै पालमा!
तिमीले गहना मागेको छैनौ
र पनि हामी छिटै किनौंला केहि
बच्चालाई स्कुल भर्ना गर
राम्ररी यसलाई हामी पढाउँला !
छोराले बाबा भन्यो कि
मेरो अहिले बाढुली बढ्या छ
तिमीले के सोच्यौ अहिले
मेरो हृदय गति चड्या छ !
यसपाली अब लेख्न सिक्ला
बाबा लेख्न सजिलो छ
आमा संगै सिकाई देऊ
बाबा यो हो भनि पनि फेरी चिनाई देऊ !
बाबा छिट्टै आउँछ
खेलौना पापा ल्याउँछ
गहना चाही पछी गरौंला
हेरौं तिमीलाई लुगा कति भ्याउछ !
म त यहाँ धेरै बस्दिनं
ऋण तिर्नु नै पर्यो
कमसे कम आएको भार
बिसाएर नया सुरु गर्नु पर्यो !
अब त बरु त्यहिँ बस्ने
जसो भएनि कम्मर कस्ने
सबैले यति काम उतै गरे
सुनै फल्छ, सबै एक बन्न सके !
1999 - Chennai, India
posted Feb 11, 2012, 8:48 PM by Weall Nepali [ updated Feb 23, 2013, 10:00 PM ]
किन किन हो
किन किन जीवन,
उराठ लाग्छ ।
किन किन मृत्‍यु,
आफ्नै झै लाग्छ ।
हवासंगै उडु झै लाग्छ ।
बादलमा नाँचु झै लाग्छ ।
किन किन एकै झट्कामा
अन्ताऔ झै लाग्छ ।
धुवासंगै उडु झै लाग्छ,
पानी बनी बगौ झै लाग्छ ।
बसन्त के हो के हो
शिशिरनै प्यारो लाग्छ
किन किन एकै झिल्कामा
सबै जलाऔ जलाऔ झै लाग्छ ।
बेलगाम हाँसु झै लाग्छ
हाँसोबाटै रु रु झै लाग्छ ।
1996, Dharwad India
के थियो र मेरो
के थियो र मेरो के हुनेछ भोलि
सबै सबै यहि छाडेर जानेछु ।
केही आस्था केही विश्वाश
केही चाहना लिएर जानेछु ।
म खरानी भएपछी केहीबेर
मेरो चर्चा होस्,
म नभए पनि कहिले काहि
मेरो कुरा होस् ।
यही चाहन्छु म, यहि चाहन्छु म ,
यहि यत्ति चाहन्छु म ।
जे लिएको थिए सबै फिर्ता गरेर जनेछु ।
केही स्नेह, केही सदभाव
केही ममता लियेर जाने छु ।
मैले गरेको कामले कसैको भलो होस्
मेरा शीजनाहरूले जग उज्ज्वल होस् ।
1997, Dharwad India
मैले मृत्युको अनुभव गरिसकें
मैले मृत्यूको अनुभव गरिसकें ।
मैले धुवासँगै जीवन फालिसकें ।
मैले बादल पारिको संसार देखिसकें ।
मैले मृत्यू भेटी कुरा गरिसकें ।
मृत्यू आनन्द रैछ ।
मृत्यू शान्ति रैछ ।
मृत्यू कामना रैछ ।
मृत्यू भावना रैछ ।
जीवनको अन्तिम सत्य मृत्यू मात्र रैछ ।
मैले जीवन बिदाई गरिसकें ।
मैले चीता जलाईसकें ।
म पर पुगिसकें ।
मैले सबैलाई भुलिसकें ।
जीवन नजान्नेलाई काँडा रैछ ।
थाहा नपाउनेलाई कष्ठ रैछ ।
भागनेलाई लखेट्दो रैछ ।
जीउनेलाई जिवन रैछ ।
मेर्नेलाई जहिले नि मृत्यू रैछ ।
1996, Dharwad, India
केहि बन्ने आशा
केहि बन्ने आशा लिएर
केहि गर्ने चाहना संगै
एउटा दीयो बोकी
यो बाटोमा हिडीरहे ।
जब बिहानी भयो
मेरो आँखा तिर्मिरायो
ति निन्द्राका सपना रहेछन
बिउझिंदा सबै बिलायो ।
जब साँझ पर्यो
एउटा हुरी आयो
त्यो सानो दीयो त्यसै निभायो
मेरो दीयोमा तेल नै रहेनछ
चाहना मात्रै कतै हरायो ।
जब दिन चड्यो
लहर आयो रहर जाग्यो
मेरो मन मस्तिष्कमा
साँचो अर्थको मेहिनतले
आफ्नो छबि देखायो ।
1998 - Dharwad, India